မာရီယို Rodriguez Cobos - Silo များ, အကလူသားဝါဒလှုပ်ရှားမှု၏တည်ထောင်သူ
ပင်မစာမျက်နှာ » NOTICIAS » hemeroteca » မာရီယို Rodriguez Cobos - Silo များ, အကလူသားဝါဒလှုပ်ရှားမှု61938 ဇန်နဝါရီလတည်ထောင်သူ - စက်တင်ဘာလ 16 2010
မာရီယို Rodriguez Cobos - Silo များ, အကလူသားဝါဒလှုပ်ရှားမှု61938 ဇန်နဝါရီလတည်ထောင်သူ - စက်တင်ဘာလ 16 2010
20 / 06 / 2019 17 / 09 / 2010 အားဖြင့် admin
ဤသည်ကြာသပတေးနေ့ညဥ့် 16 Mendoza မာရီယို Luis Rodriguez Cobos (Silo များ), တစ်ခု universal အာဂျင်တီးနားအတွက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သြဂုတ်လ 16 2007 ပေါ် Tandil, Buenos Aires အတွက်စာအုပ်တရားမျှတသောအတွက်စာအုပ် Silo များ "စိတ်ပညာမှတ်စုများ" ၏တင်ပြချက်၏အခါသမယအပေါ်လူးဝစ် Ammann အားဖြင့်မိမိအသက်နှင့်အလုပ်တစ်ခုရည်ညွှန်း Transcribe
- အာဂျင်တီးနား Mendoza | 17 2010 17 စက်တင်ဘာလ: 28
စိတ်ပညာမှတ်စုများခုနှစ်, Silo များကထုတ်ဝေတဲ့လတ်တလောစာအုပ် (Ulrica Editions, Rosario, အာဂျင်တီးနား, 2006), အယ်ဒီတာသုံးဆယ်သုံးစကားရေးသားသူ၏ "အတ္ထုပ္ပတ္တိ" တွေ့ရမယ်။
အဲဒီပေါင်းစပ်ထပ်ခါတလဲလဲထားပြီးကြောင်းသဘောထားနှင့်အတူမိမိကိုမိမိ Silo များကစေလွှတ်ခဲ့သည်: ငါတို့သည်ဝက်စာမျက်နှာတစ်ခုကျော်လွန်ဖို့စာရေးသူကဖြင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိမှတ်ချက်မရှိခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ဘာကိုအောက်တွင်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့ရဲ့တာဝန်အောက်မှာလုပ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုကိုးကားတစ်မျိုးနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးပြောပြီနှင့်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သူဤလူများ၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အလုပ်တချို့ပိုမိုနီးကပ်စွာပေးရန်ဆန္ဒဖြစ်ပါသည် မိမိကိုမိမိအကြောင်းကို မှလွဲ. အကြောင်းအရာများ။
1999 ခုနှစ်, Silo များတို့၏အကြံအစည်ဆိုတဲ့လက်ကမ်းစာစောင်ထဲမှာရေးလိုက်: Silo များထူးခြားမှုပတျဝနျးကငျြယင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်မိမိစိတ်ကူးများကနေမလာပါဘူး, လက်ခံနိုင်ဖွယ်သို့မဟုတ်မ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာပုံဖွဲ့စည်းခဲ့မိန့်ခွန်းရှိသည်။ ယင်းအစားသုံးအချက်များ, သူ့ကိုနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တဦးတည်းမှတပါးနှစ်ခုအပေါ်ကဝန်းရံကြောင်းနက်နဲသောအရာနှင့်မရေရာဒွိဟ၏အကြောင်းရင်းများကိုရှာဖွေပါ။ ပြင်ပအကြောင်းခံအချက်များ: 1 ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆိုပါအာဂျင်တီးနားစစ်တပ်နှင့်အရပ်ဘက်ခေါင်းဆောင်မှုပြည်နယ်နှင့်2။ ဒေသခံမီဒီယာ၏သဘောထား။3။ ဘယ် Silo များလွတ်လပ်ရေးပေးရန် attribute ဖြစ်ပါတယ်ယင်း၏နှောင့်အယှက်အာဏာအချက်နှင့်၎င်းတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။
တားမြစ်ရန်နှင့် Silo များရဖျက်ပေးရန်ပထမဦးဆုံးအာဏာရှင် Juan Carlos Onganíaဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအပါဆုံး tenacious လိုက်သောသူတို့သည်ရဲနှင့် Ramon ဂျေစခန်း, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအပြစ်တင်များအတွက် "သုံးဆတစ်ဦးက" တီးဝိုင်းတာဝန်ရှိသည်ဟိုဆေးဇျ Rega တည်း။ ဤရွေ့ကားဇာတ်ကောင် "အကြမ်းမဖက်" ၏ Silo များရဲ့ဟောပြောခြင်း၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအန္တရာယ်မှရိပ်မိနှင့်အကြမ်းဖက်မှုစနစ်ကိုခုခံကာကွယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကသူတို့၏အတွေးအခေါ်များကို လိုက်. ခြိမ်းခြောက်နှင့်ဤအတွေးအခေါ်များအားဖြင့်ကောက်ကာငင်ကာနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဝင်များဆန့်ကျင်ကျူးလွန်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်သတ်ဖြတ်မှုများ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Silo များအာဏာနှင့်လူသိရှင်ကြား၏မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောအပြင်ဘက်ရိုးရှင်းပြီးခြိုးခြံခြွေအလေ့အထတစ်ခုရှိ၏။ "မီဒီယာဆက်ဆံရေး" ၏မယောက်ျားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်အမြဲပြောင်းလဲမှုအတွက်တက်ကြွစွာ "အကြမ်းမဖက်" ၏နည်းစနစ်မြှင့်တင်ရန်, ထိသို့မဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ပညာ, ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးကို၏လယ်ပြင်မထိုးဖောက်, လူ့ဖြစ်လျက်ရှိစိတ်ဝင်စားအားလုံးအကြောင်းအရာများအပေါ်ရေးသားပြောပြီ, ထင် လူမှုရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်သူသည်အကျိုးစီးပွားကိုဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး, ရယ်စရာဖို့ရာအရပျ၌ထားထားသည်နှင့်ကျော်ကြားမှုသာသနာလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် System ကိုမှစိတျဆိုး Silo များ, သူကအဆိုပြုထားဘူးသော်လည်း, ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, ဝိညာဏလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်း။ အဘယ်သူ၏အပြုအမူဖှယျဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးကလူတစ်ဦး; အဘယ်သူ၏အတွေးအခေါ်များကိုတစ်ဦးအချည်းနှီးဖြည့်ပါနှင့်, ရှိသမျှအထက်တစ်ဦးတိမ်းညွတ်ကွဲပြားခြားနားသောအနာဂတ်ပေးပါ။
"သူ့ကိုထင်ပါစို့သွားနှင့်ဖြတ်သန်း" ဟုအဆိုပါလက်တွေ့ကျကျကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြစ်ခဲ့သည်။ တည်ရှိမှုနှင့်လူ့အတွေ့အကြုံကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့မူရင်းအတွေး, တက်ကြွခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားလူများနှင့်ခဲ၏ဝင်ရောက်ဖို့မြင့်တက်ပေးဒါပေမယ့်ဒီ bienpensantes အတွက် "သည်းမခံနိုင်သော" ဖြစ်ခဲ့သည်။
နှောင့်ယှက်အမြဲအတူတူပင်လမ်းထဲသို့ပြေး ဝင်. : သူတို့ကြော်ငြာကြွေးကြော်သံများပုံပျက်နေသည်အဖြစ်သူတို့ကိုသုံးပြီးသူတို့ရဲ့သော့ချက်စိတ်ကူးများ, သူတို့ရဲ့အရေးအသားတွေနဲ့စကားဝှကျထားသော plagiarize ဖို့, ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုထံမှ detract ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါတွေကိုကသူ၏ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းခြေလှမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သူ၏စကားသာမန်လူများ၏နှလုံးသားများရောက်ရှိတားဆီး။
ဒါဟာသောတန်ခိုးတော်ပြောင်းကုန်ပြီကတည်းကကြပြီသောကွဲပြားခြားနားသောကဲ့ရဲ့အခြေခံနိမ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ 1993 အတွက်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့နှငျ့အတူသူ့ကိုခွဲခြားခဲ့သူရုရှားပညာရှင်များ၏ unprejudiced ကြည့်စကားမစပ်, ရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ 1999 ၌ရေးသားထားသည်။
သူတို့ရဲ့အကြမ်းမဖက်ဝါဒ Spreading အိန္ဒိယအတွက်ဆန္ဒပြပွဲပါဝင်သည့်ဥရောပခရီးစဉ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောမြို့ကြီးများအတွက်ပို့ချချက်ပေးရန်, 1981 အတွက်, သူ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ Silo များခန်းမများနှင့်ဖုံးအုပ်အားကစားကွင်းနှင့်ဘုံဘေမြို့မှာ Choupaty ကမ်းခြေများကဲ့သို့ကြီးမားသောပွင့်လင်းကဖေးတွေမှာစုဝေးစေလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်သူ၏သတင်းစကားကိုအားပေးသောကွောငျ့သူတို့ကဘောင်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ရပ်များရှိကြ၏။ သူသူတို့ကိုယ်တိုင်က "အကြမ်းမဖက်လက်ရှိအမေရိကန်လက်တင်အမြစ်များ" ဟုခေါ်သောအရာကိုကောင်းစွာသိသည်။ နောက်ပိုင်းညီလာခံများကြီးထွားလာသောကော်ရရှိနှင့် 140 နိုင်ငံများရှိလူသနျးပေါငျးမြားပါဝငျသော, လူတိုင်းနီးပါးအတွက်တက္ကသိုလ်များမြင်ကွင်း, ယဉ်ကျေးမှုစင်တာများနှင့်လူထုလမ်းများမှာရှိခဲ့ပါပြီ။
မကြာသေးမီကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာများ၏အနေအထားကိုကျနော်တို့နိုင်ငံမှာပိုပြီး diffidently, ပြောင်းလဲပြီဟန်နှင့်ဥရောပထဲမှာအဖွဲ့အစည်းများ, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်မီဒီယာများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုလာပြီဖြစ်ပါတယ်, အာရှနှင့်။ သူတို့ကမီဒီယာဘက်လိုက်မှုအတားအဆီးများလျှော့ချနှင့်ဤတွေးခေါ်၏လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်။ 2006 ခုနှစ်တွင်နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးပေါ်စင်တာဖန်ဆင်းတော်မူသောကမ္ဘာကငြိမ်းချမ်းရေး, သူ့ရဲ့ဟောပြောခြင်း, အရင်ပြင်, လမ်းများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အားကစားကွင်း၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ဖန်သားပြင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ Silo များနားထောင်ရန်နှင့်ပိုပြီးအများအပြားသည်အဘယ်သူ၏စကားသည်ညင်ညင်သာသာဝိညာဉျတျောလာအောင်နှိုးဆွတဲ့သူတော်ကောင်းစကားကိုနားထောငျဖို့စွန့်ပစ်ပုံရတယ်သူကိုသန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။
တောင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအများပြည်သူပြပွဲအကြီးအကျယ်ဘုရားဖူးဖြစ်လာကြပါပြီ။ 1999 မှာတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအများပိုင် harangue ၏30ºနှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အချို့လေးထောင်ကလူ "Punta က de Vacas" ပထမဦးဆုံးနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ရာလူတွေပြောသောရှိရာလူဆိတ်ညံလျက်အရပ်ဌာန၌သူ့ကိုနားမထောင်ကြပါတယ်။ 2004 ခန့်ခုနစ်ထောင် 2007 အရေအတွက်ကထက်ပိုမို 10 တထောင်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ပန်းခြံရှိအမြဲတမ်းလည်ပတ်မှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်စာနယ်ဇင်းဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ထားပြီး built "ကင်းမျှော်စင်, ယုံကြည်ခြင်းအား။ "
Silo များတင်ဆက်သည့်အခါ 2002 ကတည်းကသတင်းစကား (သူတို့မျက်စိတငျပွအားလုံးလူမှုရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏အရွေးနုတ်ဖိုး) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမြို့ပြ sala နှင့်ပန်းခြံများပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာလှုံ့ဆော်မှုဤအရပ်တို့ကိုငါးတိုက်ကြီးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ သူတို့ထဲကတချို့က Punta က de Vacas ပန်းခြံ, Manantiales, la Reja, Caucaia Kohanoff နှင့်တောင်အမေရိကပါ၏ မြောက်အမေရိကအတွက်အနီရောင်ဖြီး; Attigliano နှင့် Toledo ဥရောပနှင့်ပြီးသားအစပျိုးစီမံကိန်းများ, အာရှနှင့်အာဖရိက၏ပန်းခြံ။
Silo များပေးသည်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကားစုံစုံနေသောခေါင်းစဉ်: သူ၏နာမ Mendoza61938 ဇန်နဝါရီလအတွင်းမွေးဖွားသူမာရီယို Luis Rodriguez Cobos ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Alejandro နှင့် Federico ၏အဘဖြစ်၏နှင့် Mendoza န်းကျင်ငယ်လေးတစ်မြို့ (Chacras က de Coria) တွင်နေထိုင်, Ana Cremaschi မှလက်ထပ်သည်။ သူဟာစာရေးဆရာဖြစ်ပြီးအချို့နှစ်ပေါင်းအဘို့, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်သူ၏စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုများစွန့်ပစ်။
သူ၏အဓိကထုတ်ဝေအကျင့်ကိုကျင့်နေသောခေါင်းစဉ်: ကမ္ဘာမြေလူသား, အတွေးအခေါ်, အတောင်ခြင်္သေ့၏နေ့, ပဲ့ထိန်းအတွေ့အကြုံများ, Universal Root ဒဏ္ဍာရီ, ငါ့သူငယ်ချင်းများမှပေးစာမှအလှူငှမြေား, နယူးလူသား Silo များ၏အဘိတိုက်တွန်းနှင့်စိတ်ပညာမှတ်စုများ။ သူတို့ကအစကသူ့ပြီးပြည့်စုံမှုနှစ်ခု volumes ကိုထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားစာအုပ်တွေဘာသာပြန်ထားသောနှင့်ထုတ်ဝေအဓိကဘာသာစကားများ, ဘာသာစကားများနှင့်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများနှင့်စာဖတ်ခြင်းငယ်ရွယ်ဆန္ဒပြသူတွေ, New လက်ဝဲ, လူသားဝါဒ, ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စိတ်ပျက်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ကဆိုပါတယ်အဖြစ် နှစ်မှစ. 2002, Silo များသတင်းစကား, ဝိညာဏရှုထောင်မောင်း။
တပရိုဖိုင်းကိုဖျောပွခဲ့လျှင်, ငါတို့သည် Silo များအတွေးတစ်ဦးကလက်ရှိ၏ ideologue ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်: နယူးသို့မဟုတ် Universalist Humanitarian သည် (သို့မဟုတ် Siloist လူသားသူသည်ဤတန်ပယ်ချပေမယ့်); non-အကြမ်းဖက်လူမှုရေးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု: အလူသားလပ်ြရြားမြ, ဝိညာဏစကားရပ်: အဆိုပါကို Message ။
Silo များ၏ဒေသနာ, ပေါင်းလဒ်အတွက်, လူ့ဖြစ်လျက်ရှိရိသောအခြေခံပြဿနာများကိုကူးပြောင်းနေရာ။
categories hemeroteca လက်မှတ်အညွှန်း